Klas omume ikpe megide Apple maka eserese nke MacBook Pro 2011 azalarị 7 afọ ole na ole | Esi m mac
macOS Nnukwu Sur
Klas omume ikpe megide Apple maka eserese nke MacBook Pro 2011 azalarị 7 afọ ole na ole
Manuel Alonso | 14/05/2021 19:00 | Noticias
Na 2014, afọ asaa gara aga, anyi gwara gi na ụfọdụ ndị ọrụ sonyeere na gbara akwụkwọ a na klas edinam ikpe megide Apple maka ndị ogbenye na ọnọdụ na arụmọrụ nke GPUs na MacBook Pro 2011. E nwere a glitch na ha GPU mere ka ndị emetụta a onyeicalzi glitch site n'oge ruo n'oge na ha igwe . Usersfọdụ ndị ọrụ gbanwere eserese ahụ site na ịkwụ ụgwọ mmefu na nke ahụ bụ ihe ha kwuru ọtụtụ afọ gara aga. Ugbu a ikpe ziri ezi anabatala, ọbụlagodi na Canada.
Apple bịara ịgbanwe ụfọdụ kọmputa ndị a n'ọtụtụ n'ime ndị emetụtara, mana obere ndị ọrụ wepụtara otu nsogbu ahụ. Ọnọdụ ahụ ghọrọ nke na-agaghị ekwe omume ma ọtụtụ ndị ọrụ akwụworị ụgwọ ndị kpatara mgbanwe nke eserese ahụ. Maka na ọ bụ mmetụta mmụọ ha kpebiri isonye na tinye akwụkwọ ikpe na klas ka ụlọ ọrụ wee kwụọ ụgwọ mmefu ahụ.
Ugbu a na Quebec ha nwere ike nweta nkwụghachi maka nrụzi mgbe ịgba akwụkwọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ asaa ka nke ahụ gasịrị, ụlọ ikpe Canada mechara kwado mkpezi ahụ. Ọ ga - eme ka Apple nwee ịkwụghachi ndị emetụtara emetụta. Dị ka a kọrọ site PCMag, E gosipụtara nkwekọrịta ahụ n'izu a site na Courtlọikpe Kasị Elu nke ógbè Quebec. Ọ na-ekwu na onye ọ bụla zụrụ 2011 MacBook Pro nke anụ ọhịa 15 na 17-inch na AMD GPU ma biri na Quebec tozuru oke maka nkwụghachi maka nrụzi ọ bụla metụtara akwụghị ụgwọ.
Ikpe ahụ kwuru na a manyere ndị ahịa ịkwụ ụgwọ ihe ruru $ 600 maka nrụzi ahụ. Nkwekọrịta ahụ na-akọwa na ndị nwe MacBook Pro 2011 metụtara ha nwere ike inweta dollar Canada 175 (ihe dị ka euro 120), maka nsogbu ọ bụla ha nwere, gbakwunye ụgwọ zuru ezu maka ụgwọ nrụzi ndị ọzọ.
Enwere ike ịnweta nkwekọrịta ahụ site na weebụsaịtị a que ga-emelite na ụbọchị ole na ole sochirinụ na nkọwa ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Klas omume ikpe megide Apple maka eserese nke MacBook Pro 2011 azalarị 7 afọ ole na ole
Lenovo na - eduga n’ịkwụ ụgwọ maka Apple Magic Mouse
Home Tupu Ọchịchịrị Oge XNUMX Akpa Trailer Ugbu A Dị
Nweta akụkọ kachasị ọhụrụ na Apple na Mac.
Debanye Akwụkwọ Akụkọ